Maarso | 2019 | WEEJIDOW
Archive for Maarso, 2019
War deg deg ah DAAWO: MADAXWEYNE FARMAAJO IYO KHEYRE OO DACWADO LOOGU GUDBIYEY WADAMADA AY BAASABOORADA KA HEYSTAAN
WAAJIDPRESS – 31 March 2019:
DAAWO: XISBIGA AMNIGA IYO CADAALADA EE UU HOGAAMIYO MUKHTAAR ROOBOW AYAA DACWADO UGA GUDBIYEY WADAMADA AY BAASABOORADA KA HEYSTAAN MADAXWEYNE FARMAAJO, RAISUL WASAARE KHEYRE IYO SARAAKIIL KALE – DAAWO:
DAAWO: SHIRKA WASAARADAHA WAXBARASHADA EE MAAMUL GOBOLEEDYADA OO MAANTA BAYDHABA KA FURMEY
DAAWO: GOLAHA WASIIRADA DOWLAD GOBOLEEDKA KOONFUR GALBEED OO MAANTA ANSIXIYEY $8.5 MILLION OO AH MIISAANIYADA SANADKAN EE 2019
Wasiir Cawad oo shaqada ka ceyriyey agaasimihii xafiiskiisa ee taageeray in xiriir lala yeesho Israel
Sida ay xogta ku heshay Shabakadda Caasimadda Online, waxaa shaqadii laga ceyriyey C/llaahi Axmed Dool oo ahaa Agaasimihii Xafiiska Wasiirka Arrimaha Debadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Go’aankaan oo kasoo baxay Wasiirka ayaa la sheegay inay sababta shaqada looga ceyriyey tahay hadalkii uu dhawaan ku taageeray in xiriir lala sameysto Maamulka Israa’iil ee xoogga ku heysto dhulka Falastiin.
CabduLLAAHI Axmed Dool oo ah agaasimiha shaqada laga ceyriyey ayaa Twitterka ku soo qoray Qoraal uu ku taageerayo inay Soomaaliya xiriir la yeelato Israel.
Sidoo kale waxaa uu ku tilmaamay shacabka reer Falastiin dad khasaaray, isagoo xusay in Ururka Xamaas ay afduubkooda dadkooda ku nool Gaza.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa isna qoraal kooban uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray ku sheegay in qof walba oo aaminsan in Israa’iil uu xiriir dhex maro uusan ka shaqeyn karin dowladda Federaalka.
“Israel inta ay dhul Muslimiin ah iyo magaalo barakeysan xoog ku haysato iyo inta ay xabsiga dusha ka furan ku hayso reer Falastiin, wax xiriir ah nama dhex mari karo, qof walba oo fikirkaas qabana kama shaqeyn karo, umana shaqeyn karo Dowladda Federaalka Soomaaliya”ayuu yiri Cabdinuur Maxamed Axmed.
War Cusub DAAWO: KULANKII BAARLAMAANKA OO MAANTA BUUQ KA BILOWDEY ISLA MARKAAN XIRMEY – sababta
Maarso 30, 2019
WAAJIDPRESS – 30 March 2019:
Waxaa baaqday kulan qorshaha uu ahaa in maanta ay isugu yimaadaan Xildhibaanada Golaha Shacabka Somaliya, kaasi oo xalay Gudoonka uu ku wargeliyay Xildhibaanada.
Xarunta Golaha Shacabka ayaa maanta waxaa ku xaadiray Xildhibaanada Baarlamaanka oo Ahaa kuwa wasiirada, waxaana markii la gaaray waqtigii loo madalsanaa furitaanka Baarlamaanka la waayay kooramka buuxa ee Xildhibaanada.
Gudoonka Golaha Shacabka ayaa waqti dheeri ah ku daray xilliga la sugaayo Xildhibaanada maqan, balse ma jirin Xildhibaano kale oo soo xaadiray tiradoo joogtay aan ka aheyn.
Gudoonka Baarlamaanka ayaa markii dambe ku dhawaaqay Kooram la’aan inuu u baaqday kulankii Baarlamaanka ee maanta, kadib markii ay soo xaadireen Xildhibaano gaaraya 116 Xildhibaan.
Sida sharciga ah Kooramka Baarlamaanka, wuxuu ku furmaa 139 Xildhibaan, balse inta badan Xildhibaanada Wasiirada ah ayaa ka maqnaa maanta Golaha Shacabka.
Dhinaca kale waxaa Xarunta Baarlamaanka lagu dhex arkay Xildhibaano watay Warqado ay ku qoran yihiin Golaha Shacabka waa Wakiiladii Shacabka ee la xasuuqayo ee ma’ahan Golaha Sacabka.
Xildhibaanadan ayaa doonaayay in Ajandaha laga dhigo arrimaha ammaanka, halka Ajandaha uu ahaay arrimaha Dastuurka oo Guddiga Baarlamaanka ee Dastuurka warbixin ay soo bandhigi lahaayeen – DAAWO:
War deg deg ah: Ciidamo ka tirsan dowladda oo weeraray Xarunta Tv-ga Universal ee Muqdisho
Ciidamo ka tirsan dowladda Federalka Somaliya ayaa weerar ku qaaday Xarunta Tv-ga Universal ee Magaalada Muqdisho, iyadoo Shaqaalaha Tv-ga ay ku jiraan xaalad nabadgelyo ah.
Ciidamadan ayaa bilaabay rasaas ay ku fureen illaada Tv-ga oo banaanka hore ee Xarunta Tv-ga illaalo ka haayay, waxaana taasi ay dhalisay in Ciidanka illaalada dhankooda ay ka jawaabaan rasaastaasi.
Xarunta Telefishinka Universal oo ku taalla agagaarka Tiyaatarka ayaa la sheegay in Ciidamo Boolis ah oo ka socday Waaxda Canshuuraha ay weerareen.
Argagax ayaa soo food saaray Shaqaalaha Xarunta Tv-ga Muqdisho, kadib markii iyaga oo si nabadgelyo ah Bulshada ugu adeegaya mar kaliya rasaas lagu furay.
Illaa hadda lama garanaayo sababta Xarunta Tv-ga weerarka loogu soo qaaday.
Shaqaalaha Tv-ga ayaa sheegay inay dareemayaan walaac dhanka ammaanka ku saabsan, maadaama ciidamada dowladda ay weerar ku soo qaadeen Xaruntooda.
Maalmahan dambe amnidaro wayn ayaa ka jirta Magaalada Muqdisho oo qaraxyo gaadiid ay ka dhacayaan Magaalada gudaheeda.
Sabtidii aan soo dhaafnay ayeey aheyd markii dabley ka tirsan Al Shabaab oo xirnaa dareeska Ciidamada Booliska ay weerar ku qaadeen dhismaha Wasaaradda Shaqada & Shaqaalaha oo ay ku dileen Wasiir Ku xigeenkii Wasaaradaasi.
DAAWO: KULAN DHAQAALO URURIN AH OO BAYDHABA KA DHACAY
DAAWO LABO VIDEO: SHIR SHALAY KA DHACAY NAIROBI OO DOWLADA FARMAAJO LOOGU BAAQEY IN SI DEG DEG LOO SII DAAYO MUSHARAX ROOBOW
Maarso 29, 2019
DAAWO: GUDOOMIYAHA CUSUB EE SHABEELLAHA HOOSE OO XILKIISA LA WAREEGEY IYO MAAMULKA KOONFUR GALBEED OO MAANTA GOGOL NABAD DHIGEY MAGAALADA BARAAWE
Wasiiru dowlaha Xafiiska Raisul Wasaaraha oo ka soo jeeda beesha DIGIL IYO MIRIFLE oo caawa casho u suubiyey wasiirada jubaland ee Muqdisho ku sugan
WAAJIDPRESS – 29 March 2019:
Wasiiru Dawlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. CabduLLAAHI XAAMUUD (oo ka soo jeeda beelweynta DIGIL IYO MIRIFLE), ayaa caawa Casho Sharaf u sameeyay wasiirrada Dawlad Gobaleedka Jubbaland ee socdaalkiisa Muqdisho ku wehliya madaxwaynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Casha sharafta oo ay ka soo qayb galeen qaar kamid wasiirada dawladda federaalka iyo howl-wadeennada xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa Wasiir Xaamuud u suubiyey wasiirrada ka yimid maamul gobaleedka Jubbaland.
Wasiirrada Jubaland ee casha sharafta ka soo qayb galay ayaa aad uga mahadceliyay wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul Wasaaraha soo dhawaynta heerkeedu sareeyo, waxa ayna sheegeen in ay soo dhawayntu kaabayso wadashaqeynta iyo isku xirnaanta labada dhinac.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maarso, 2019.